दोलखामा अवैध बिटक्वाइन बन्ने गरेको खुलासा ,सम्पत्ति विदेश लैजान बिटक्वाइनको प्रयोग ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
दोलखामा अवैध बिटक्वाइन बन्ने गरेको खुलासा ,सम्पत्ति विदेश लैजान बिटक्वाइनको प्रयोग !
काठमाडौँ । संसारको सवैभन्दा महंगो भर्चुअल मुद्रा बिटक्वाइन दोलखा जिल्लामा बन्ने गरेको खुलेको छ । नेपालमा विट क्वाइन कारोबारी रहेको र त्यसबारे सचेत रहन राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेपछि सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
हालै नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआइवी)ले पक्राउ गरेका काठमाडौं भाटभटेनीका प्रशान्त प्रताप शाहले हंङ्कङवाट विटक्वाइन उत्पादन (माइनिङ) गर्ने मेसिन नेपाल मगाएर यसको उत्पादन गरेको खुलेको हो ।
शाहले दोलखाको किर्नेटारस्थित खिम्ती जलविद्युत आयोजना नजिकै भिम बहादुर श्रेष्ठको घरमा कोठा भाडामा लिइ बिटक्वाइन उत्पादन (माइनिङ) गर्ने गरेको पत्ता लागेको हो । प्रशान्त प्रताप शाह अमेरिकामा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेका व्यक्ति हुन् ।
सिआइवीले छापा मारेर विटक्वाइन माइनिङ गर्न प्रयोग हुने सामाग्री समेत बरामद गरेको छ । प्रहरीले बिटक्वाइनको माइनिङ गर्न प्रयोग हुने विटमेन माइनर २६ थान, विटम्यान पावर सप्लाई १५ थान, इन्टरनेट राउटर १ थान, भिडियो रेकर्डर १ थान, ल्यापटप एक थान लगायतका सामान बरामद गरेको छ ।
नेरु, भारु, डलर भौतिक मुद्रा हुन् भने बिटक्वाइन भर्चुअल (अभौतिक) मुद्रा हो । भौतिक मुद्रा देशका सरकारहरूले निर्माण गर्दछन् । यो ओपनसोर्स सफ्टवेयरमा आधारित हुन्छ । यसलाई क्रिप्टोकरेन्सी भनिन्छ । यो एक एक विश्वव्यापी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हो । चीनलगाएतका देशमा क्रिप्टोकरेन्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाईएको छ।
१० हजार नेपालीसँग ४० अर्बको बिटक्वाइन
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानअनुसार नेपालमा १० हजार नेपालीसँग बिटक्वाइन छ । एक नेपालीसँग औसत १० बिटक्वाइन भएको अनुमान गर्दा प्रतिक्वाइन तीन लाख ८८ हजार रुपैयाँको दरले कुल मूल्य करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।
नेपालबाट स्थायी रूपमा विदेश जानेहरूले सम्पत्ति लैजानका लागि बिटक्वाइनको प्रयोग गरेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाको भनाइ छ । नेपालीले विदेश जाँदा अधिकतम ५ हजार डलर मात्रै लैजान पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले नेपाली पैसा विदेश लैजाँदा डलरको सीमा तोकेका कारण नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति विदेश लैजान बिटक्वाइनको प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
‘नेपालबाट पुँजी विदेश लैजानसमेत पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको डिभी परेकालगायत विदेशमा स्थायी रूपमा बस्न जानेहरूले चल–अचल सम्पत्तिलाई बिटक्वाइनमा परिवर्तन गरेर लैजाने गरेको देखिएको छ,’ उनले भने । यहाँ बिटक्वाइन खरिद गरी विदेश जाने र त्यहाँ त्यो बचेर नगद प्राप्त गर्ने गरेको पनि देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका चीन भ्रमणका एजेण्डाहरु !